သည်းအူပြတ်မျှ – KZ’s ထမင်းဆိုင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » သည်းအူပြတ်မျှ – KZ’s ထမင်းဆိုင်	28
Posted by ဇီဇီ on Jun 13, 2016 in Creative Writing, Food, Drink & Recipes, How To.., Society & Lifestyle | 28 comments
မင်းအတွက်ကို အသည်းရော နှလုံးရော ကျောက်ကပ်ရော အူစုံ ရော ပေးဗျဇီ။
ဒီ တပတ်တော့ ကလီစာဟင်း စုံတာနဲ့ ထမင်းဆိုင်ထဖွင့်လိုက်တယ်လေ။
ကလီစာမှ စာရင်းချကြည့်တော့ ဒီလိုတွေထွက်လာတယ်။
၂) ဘဲ အသဲအမြစ်
၁) ဆိတ်ကလီစာ (အသည်း/အဆုတ်/ကျောက်ကပ်)
၁) ဝက်ကလီစာ (အသည်း/အဆုတ်/ကျောက်ကပ်)
၂) ဝက် အချင်း
၂) အမဲ ဝမ်းတွင်းသား
အဟိ။ ဘာကျန်ခဲ့တုန်း ထပ်ဖြည့်ပေးကြပါအူးးး။
ငါးဥချဉ်စပ်နီနီလေး (ပုံ/နည်း မွသင်ဇာမြင့်) ——- ငါးဥကို ဂျင်းကြက်သွန်ဖြူအရည်ညစ် ဆားနယ်ပီး အရင်ပြုတ်လိုက်တာ… ကြက်သွန် ဖြူ အနီ ဂျင်း အနှစ်ထောင်း နဲ့ နနွင်း ငြုပ်သီးမှုန့် ငါးပိ ဆီသပ် မကျည်းမှည့်လိုသလောက်ထည့် အနှစ်အရသာကောင်းပြီဆို ငါးဥထည့် ရေနဲနဲခြင်းထည့် ငါးဥကျက်ခါနီး ငြုပ်သီးအစိမ်းတောင့်များများထည့် နံနံပင်အုပ် ဆီပြန်ရင်ရပြီ အကြိုက်ဆွဲပေတော့
ငါးဆီဖောင်းချက် (ချက်နည်း – wow/ ပုံ – မွဘုတ်) ဈေးသယ်ဆီက အကျွင်းအကျန်အကုန်တောင်း ထုံးလေးနဲ့နယ်ဆေး ကပ်ကျေးနဲ့အနေတော်ညှပ် ဆားဆနွင်းနယ်ပီး ခရမ်းချဉ်သီး ကြက်ဖြူနီထောင်းထားတာလေး ဆီသပ်ချက် ရှမ်းနံနံလေးအုပ် ရှယ်မှရှယ်
ငါးဥ ကချင်ချက် (ချက်နည်း – မားနန်း) Nan Kay Thi Hlaing
ငါးဥကို တရေ အရင်ပြုတ်ရမယ်
ကြက်သွန်ဖြူနီ မညက်တညက်ထောင်း ဂျင်းရိုက်ပြားထည့် ,
ပွက်လာရင် ငါးဥထည့် ,
ငရုပ်သီးတောင့် ရိုက်ပြားထည့် ,
အချဉ်အရသာတွက် ကိုယ်ကတော့ ချဉ်စော်ခါးသီးခြောက်ထည့်မယ် ,
ပြီးရင် နံပင်/ပင်စိမ်းလေးခပ်လိုက်မယ် .. ဟိ
ငါးစီပေါင်း ပြုတ်ကြော် (ချက်/ပုံ မွဘုတ်) ပြုတ်ပြီးကြော်ပါတယ်ဆို ညှီတယ် ရို့မေရီ ရှိထည့် မရရင့် နာနတ်ပွင့် ဆားထည့်ပြုတ် မနူးတနူးမှာရေဆေးချလိုက် ပြီးဆီပူထဲထည့်ကြော်တာ ပထမတစ်ဝက်ကအပျော့ကြော်တာ နားရွက်သုတ်လိုပဲ နောက်တစ်ဝက်ကတော့အကြွပ်ကြော်တယ် ဘိတ်ချဉ်နဲ့စားတာ
ကြက် အချင်း ကြော် (ချက်နည်း – ဘုတ်/ ပုံ – မွသဲ) ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး ဥအိမ်ထဲတော့ ကြက်ဥကွဲရှိတတ်တယ် ရေဆေးပြီးကြက်သွန်ဖြူ ချင်းထု ဆနွင်းဆားဆီ ထည့်ပြီးလုံးလိုက် ဥအိမ်ကမနူးလွယ်ဘူးရေထည့်နှပ်ထား ဆီပြန်ဆိုကျက်ပြီ ပဲငံပြာရည် ငုတ်ကောင်း မဆလာ ကြိုက်ရာထည့် ဆီပြန်အနှစ်ဟင်းလည်းကြက်သားချက်သလိုချက် ဥကအနှစ်တေ အချင်းတိုင်ရွေးယူ အုအိမ်ကနူးမှစားကောင်းတာ
ကြက်အူဆီပြန် ……………. ၁။ စစချင်း ကြက်အူလေးများကို ဓားသေးလေးဖြင့် ခွဲ၍ ဖြစ်စေ၊ ကတ်ကြေးဖြင့် ထိုးခွဲ၍ဖြစ်စေ ခွဲကာ ဆားများများဖြင့် သေချာသန့်စင်အောင် ထပ်ကာထပ်ကာ ဆေးကြော ပေးပါ။ အနေတော် ဖြတ်တောက်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် ချင်း ထောင်းပြီးသား အနည်းငယ်၊ ကြက်သွန်ထောင်းပြီးသား အနည်းငယ်တို့ဖြင့် ဆား၊ ကြက်သားမှုန့်တို့ဖြင့် ဆုပ်နယ် ထားပါ။ ၂။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၊ ငရုတ်သီးကြမ်းတို့ကို ညက်နေအောင်ထောင်းထားပါ။ ဆီပူတွင် ထောင်းထားသော ငရုတ်သီးကြက်သွန်ကို စပါးလင်ဖြင့်ဆီသတ်ပေးပါ။ ကြက်သွန်အရော ကြွပ်လာပြီဆိုရင် ကြက်အူများကို ထည့်ပြီး ကြာကြာလုံးပေးပါ။ ဆီပြန်လာရင် ရေအနည်း ငယ်စီ အကြိမ်ကြိမ်ထည့် အဖုံးအုပ်လိုက်ဖြင့် နူးသည် အထိ အဖုံးအုပ်ထားပါ။ ကြက်အူများ နူးအိလာရင် ငရုတ်သီးများ၊ နံနံပင်များ အပေါ်ကအုပ်ကာ အဆုံးသတ်နိုင်ပြီ။
ဝက်သားဒုတ်ထိုး (ချက်နည်း- မသက်ငုံ/ ပုံ-မချိုသက်မာ) —— အစာအိမ်အူ မန်ကျီးရေနဲ့ဆားနဲ့ဆေး ကျောက်ကပ်ကလွဲ ကျန်ကလီစာအားလုံးထည့်ချင်ရာထည့် သကြားနဲ့နာနတ်ပွင့် လှော် ကလီစာတွေ ထည့် ကြော် အရောင်ယူတာ ရေထည့် ပြုတ်နူးရင်ကျက်ပြီ ဝက်သားဒုတ်ထိုး (ချက်နည်း- မသက်ငုံ/ ပုံ-မချိုသက်မာ) —— အစာအိမ်အူ မန်ကျီးရေနဲ့ဆားနဲ့ဆေး ကျောက်ကပ်ကလွဲ ကျန်ကလီစာအားလုံးထည့်ချင်ရာထည့် သကြားနဲ့နာနတ်ပွင့် လှော် ကလီစာတွေ ထည့် ကြော် အရောင်ယူတာ ရေထည့် ပြုတ်နူးရင်ကျက်ပြီ
ဝက်အူမကြီးသုတ် နည်း/ပုံ မွ Ma Moe Khaing အူကို..သန့်ရှင်းပါ…ဂျင်းတပြားထဲ့ပြီးနူးအောင်ပြုတ်ပါ… ကျက်ပြီးအူကို..ပါးပါးလှီး…ထည့်လိုသောအစာ…(ခရမ်းချဉ်..သခွားသီး..ဂေါ်ဖီထုပ်.. ဥနီ..ကြက်သွန်နီ..)..များကိုပါးပါးလှီးထည့်ပါ… ဆီချက်..ပဲမှုန့်..ကြက်သွန်ဖြူ..ငရုတ်သီးစိမ်း.ငံပြာရည်….သံပုရာသီး ..နဲ့သုပ်ပါ..😋😋😋
ဝက်အူမကြီးသုပ် —– စင်ကြယ်အောင်ဆေးထားတဲ့ ဝက်အူမကြီးကို နူးအောင်ပြုပ်ပါ ဝက်အူမကြီးကိုပါးပါးလှီးပါ ထည့်လိုတဲ့ အသီးအရွက်ထည့်ပါ ပဲမှုန့်ငြုပ်သီး သံပုရာသီး ဆီချက်ထည့် အရသာမှုန့် ထည့် ငံပြာရည်ထည့် သုပ်လိုက်ရင်တော့ ချဉ်ငံစပ်အရသာနဲ့ဝက်အူမကြီးသုပ်ရပါတယ်
ဝက်ကလီစာ ချက် (credit to ချက်နည်း/ပုံ ကိုကိုကျောက်) — ဝက်ကလီစာ (အူချို+သရက်ရွက်+အသည်း) ကို မန်ကျည်းရည်နဲ့ သာသာယာယာ စင်အောင်ဆေးပါ ။ အူချိုကို ဖြူဖွေးပြီး တင်းနေတာရွေးဝယ်ပါ ၊ ပန်းရောင် အနီရောင်သမ်းလျင် ခါး၏ ။ ဆေးပြီးလျင် အူချိုကို အစွန်းနှစ်ဘက် ပိတ်အောင်ချည်ပါ (အတွင်းက အနှစ်တွေ ထွက်မှာစိုးလို့) ၊ သရက်ရွက်နဲ့ အသည်းကို အရွယ်တော်တုံးပါ ။ ပြီးလျင် ဂျင်းရည် + သကြားအနည်းငယ် + ကြာညို့ + အရောင်တင်မှုန့် + ပဲငန်ပြာရည်အကြဲအနည်းငယ်ဖြင့် နှပ်ထားပါ ။ ကြက်သွန်ဖြူ/နီ + အရည်ညှစ်ပြီးဂျင်းဖတ် + အရောင်တင်မှုန့် ရောထောင်းပါ ။ အိုးထဲ ဆီသင့်ယုံထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ ၊ အနံ့မွှေးလာလျင် နယ်ထားတဲ့ ကလီစာတွေထည့်ပြီး သာသာယာယာမွှေ၍ အဖုံးအုပ်ထားပါ ၊ ရေလိုလျင် အနည်းငယ်သာစွက်ပါ (အရမ်းကျက်လွန်းလျင် မာသွားတတ်၏) ။ ဆီပြန်ခါနီးလျင် အူချိုတွေကို အရွယ်တော် ကိုက်ကျေးဖြင့်ဖြတ်ပြီး အရသာပြင်ပါ ။ ဆီပြန်လျင်ရပါပြီ ….
ဝက်ကလီစာ အရည်သောက် (ချက်နည်း/ပုံ – မွဘုတ်) အူ အူမကြီး ကို ဆားမန်ကျည်းသီး နဲ့ဆေး သကြားနာနတ်ပွင့်နဲ့လှော် ရှားကော့ပါးကော့ အစေ့နဲ့ဆားနဲ့ပြုတ် အရည်သောက်မို့အရောင်ရဲရဲကြီးမယူဘူး အချဉ်က သံပုရာ ကြက်သွန်ဖြူ ငရုတ်သီး သကြား ငါးငံပြာရည်နဲ့ ကဖောင်းရွက်စပ်ထားတာ..
ဝက်အူချက် (နည်း ကေဇီ/ ပုံ မားနန်း) ဝက်အူကို ရေဆေး ရှာလကာရည်နဲ့နယ်ပြီးမှတစ်ထပ်ပြန်ဆေး ရေခန်းပြုတ်ပြီးရင် စားချင်တဲ့ အတိုင်းချက်လို့ရပြီ ဂျင်း တပြားရိုက် ကြက်သွန်ဖြူ/နီ ဆီသတ် ဝက်အူထည့် ဆား၊ ပဲငံပြာရည်၊ ဟင်းခပ်မှုန့်ထည့်ပြီးဆီပြန်တဲ့ထိ တည်။ ရေမထည့်နဲ့။ ဟင်းပွတယ်။
ဆိတ်ပုဆိုးကြမ်းနဲ့ နို့အုံသား (ချက်နည်း – ဖက်ကက်/ ပုံ- မသိင်္ဂီ) ——- ဆိတ်နို့အုံသား၊ ပုဆိုးကြမ်းဟင်း…. ဆိတ်သား တစ်ပိဿာ (၁၄၀၀) ဈေးဖြစ်နေချိန်မှာ (၇၀၀)ဈေးလောက်နဲ့ရနိုင်တဲ့ ဆိတ်အူကြမ်း (ပုဆိုးကြမ်း)၊ နို့အုံသားတို့ကို အရသာရှိရှိချက်စားတာဟာ ဘတ်ဂျက်ချွေတာနိုင်သလို… တမူထူးတဲ့အရသာကိုလဲ ပေးစွမ်းပါတယ်… ဆိတ်သားပုဆိုးကြမ်း (၄၀)သားလောက်၊ နို့အုံသား (၃၀)သားလောက်ကို ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ မဆလာနဲ့နယ်… ဒိန်ချဉ် (၁၀)သားလောက်နဲ့ နှပ်ပြီး တစ်နာရီခွဲလောက်ထားပါ… ပြီးရင်တော့ ဂျင်းလက်တစ်ဆစ်၊ ကြက်သွန်ဖြူ ၃ မွှာလောက်ကို ညက်အောင်ထောင်းပါ… ကြက်သွန်နီ (၄)လုံးလောက်ကို ပါးပါးလှီး၊ နုတ်နုတ်စင်းပြီးထားပါ… ပရက်ရှာကွတ်ကာထဲကို ဆီ (၁၀)သားလောက်ထည့်ပြီး ဆီဆူလာရင် နနွင်းမှုန့်ထည့်ပြီး အနည်းငယ် ၀ါကျင့်ကျင့် ဖြစ်အောင် တည်ပါ… ပြီးရင်… ဂျင်း၊ ကြက်သွန်ထောင်းထားတာကို ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ… ကြက်သွန်ဖြူနံ့ထွက်လာရင် ကြက်သွန်နီစင်းထားတာကို ထည့်ပြီး နွမ်းအောင် ဆီသတ်ပါလေ… ပြီးတာနဲ့ နှပ်ထားတဲ့ ဆိတ်ပုဆိုးကြမ်းနဲ့ နို့အုံသားကို ထည့်ပြီး အဖုံးပိတ် ရေမြုပ်အောင်ထည့်ပြီး (၁၅)မိနစ်လောက်တည်ရပါတယ်… အဲ့လိုတည်ပြီးရင် မီးဖိုပေါ်ကချပြီး နို့အုံသားကို မြည်းကြည့်ပါ… နို့အုံသားထုံးစံအရ… သိပ်တည်လွန်းအားကြီးရင် မာသွားတတ်လို့ပါ… အနေတော်ဆိုရင် အိုးထဲကဆယ်ပြီးတော့ ပုဆိုးကြမ်းကို နူးအောင်ထပ်တည်ရပါလိမ့်မယ်… နှစ်ခုလုံးအနေတော်ဆိုရင်တော့ ဆီနဲနဲပြန်အောင်ထားပြီး မဆလာအပေါ်က ဖြူးပြီးတာနဲ့ တန်းစားလို့ရပါပြီ… ကျွန်တော့်ကြောင့် အိမ်ကလူတွေ ဆိတ်သားမစားတော့ပါဘူး… ပုဆိုးကြမ်းနဲ့ နို့အုံသားပဲစားကြပါတော့တယ်… ဘယ်လောက် သက်သာလိုက်သလဲ… အဲဒီဟာကို ကြက်သွန်နီလေးပါးပါးလှီး ရေစိမ်၊ ပြီးရင် ငရုတ်သီးစိမ်း (၂)တောင့်လောက်ပါးပါးလှီး ရှောက်ရည်လေးညှစ် ဆားလေးနဲနဲထည့်ထားတဲ့ အချဉ် (ချပ်တနီး) နဲ့စားရင် သိပ်ကောင်းပေါ့ဗျာ…
ဆိတ် ပုဆိုးကြမ်း ချက် (ချက်နည်း- မွေးမေလေ့)
ဝက်ကလီစာ Hot soup (ချက်နည်း/ပုံ – မွဘုတ်)ငရုပ်ကောင်းများများ နဲ့ပြုတ်အစာအိမ် အူ နဲ့ အဆီတွဲအသားရောပြုတ်တာSoup Base ကပြည်ကြီးငါးအခြောက် နဲနဲ နဲ့ဝက်ရိုး ပေါ့ချင်းနု နဲ့ကြက်သွန်တရုတ်နံနံဖြူးပါတယ်
ဘဲအူပြုတ် (ချက်နည်း/ပုံ – မွဘုတ်) သန့်အောင်မကျီးရည်နဲ့ဆေးပြီး ကျစ်ဆံမြီး ကျစ် ဆားထည့်ပြုတ် ဘိတ်ချဉ်နဲ့စားတာ
အမဲဝမ်းတွင်းက ပန်းသေးပြုတ် (ချက်နည်း/ပုံ – မွဘုတ်) ရေနွေးဆူအောင်တည် မုံလာ ဥဖြူ တစ်လုံး တရုတ်နံနံ ရိုး ကြပ်သွန်ဖြူ အခွံမခွာ နဲ့တစ်လုံး ဆား သကြား ငုတ်ကောင်းစေ့ အစေ့လိုက်ထည့် ဖာလာကြီး ရှားကော့ တစ်လုံးပြုတ်ပါ ထုပြီးမှထည့် နာနတ်ပွင့် နည်းနည်း ငါးငံပြာရည် အကုန်ရောပြုတ် အဖုံးဖွင့် ကြိုက်ရာကလီစာထည့် အသည်းမထည့်သင့် တရုတ်နံနံ မိတ်ဖြူးစားပါ
တစ်ချို့ချက်နည်းတွေ ပုံတွေက မမှီတာနဲ့ မပါခဲ့ဘူးး
သိတဲ့နီးတွေ ရှိသေးရင် ပြောသွားကြပါအူးး
ဂျစ်စူ says: ဆိတ် ဖိုက်တင်းဘော တဘွဲ
မယူနိုင်ရင် သဂျီးအကြွေးစာရင်းနဲ့ပေါင်းမှတ်
ခင်ဇော် says: ဆိတ် 5ting ball မပါဘုတော့။
ဂျက်စပဲရိုး says: အဟင့်
စားချင်ရက်နဲ့ မစားရလို့း)
Wet Market ထဲ သွားကြည့်အူးးး
Kaung Kin Pyar says: အရင်ဘ၀က ဘီလူးမ သေလို့ ၀င်စားလား မသိဘူး…
ခု အချင်းတိုင်နဲ့ ငါးဆီဖောင်းမြင်တော့.. အတော်သွားရည်ယိုတယ်..
အချင်းတိုင်ကို တက္ကသီလာ တက်တုန်းက သန်လျင်ဘက်မှာ အတော်စားခဲ့ဖူးတယ်…။ ငါးဆီဖောင်းကို အိမ်ကတခါမှ ချက်မကျွေးပေမယ့်.. ငါးဆီဖောင်းသုပ်ရတဲ့ဆိုင် လိုက်စားနေကျ..
ခုလို ဟင်းချက်တာမျိုးတော့ မစားဖူးဘူး…
ဒီရာသီ ဒါတွေ ရနိုင်တယ်…။
ခင်ဇော် says: ဟုတ်တယ်လို့။
အသည်းကို ခွဲလည်း ခွဲ စားလည်းစားး
အသည်းသာမက ကျန်တဲ့ ကလီစာတွေ အရမ်းစား ကြိုက်။
ဒါတောင် မစားဖူးတာတွေ အများကြီးကျန်သေးး
kai says: ယူအက်စ်မှာ အဲဒါတွေကို… ချိုင်းနီးဆိုင်မှာသွားရှာရမယ်…။
ဘိုမားကက်တွေမှာ.. ယောင်လို့တောင်မရှိ.. ။ အဲ.. မက်စီကန်(လက်တီနို)စားသောက်ဆိုင်တွေကျ.. အမဲကလီစာတွေရပြန်ရော..။
ကြိုက်သလားဆိုတော့… ငယ်ငယ်က… ရွှေတိဂုံဘုရားဈေးမှာ.. အထမ်းနဲ့ရောင်းတဲ့.. အမဲအူပြုတ်များ ခဏခဏသတိရ..။
အဲဒီ အမဲအူပြုတ်… နည်းလေးကျ.. မပါသေး….။
ဆိုတော့ ဘယ်သူမှ မပြုတ်တတ်ဘူးထင်တယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: လာဘ်တွန်းနဲ့ ရောင်းတဲ့ မက်ဆီကန် ဝက်ကလီစာပြုတ်ဆိုင် နယူးယောက်မှာ တွေ့ဖူးတယ်။ အူတွေ အခွေလိုက်…ဇက်ပြတ်နေတဲ့ ဝှီဂါမုမနဲ့ မာမွတ်ခိုင်မ်ကို သတိယလိုက်ထှာ..
ခင်ဇော် says: မဆိုးဘူးး
အစားအသောက်မြင့်လို့ နာတို့ကို လွမ်းတတ်လာရင်ကို ဒါ ဟာ နိ ရဲ့ တိုးတက်မှု။
kai says: မက်စီကန်စာ.. စားဖူးတာလေးပြန်လိုက်ရှာတာတွေ့ပြီ..။
၈နာရီခွဲကြာအောက်ချက်ရမယ့်.. အမဲကလီစာဟင်း.. စားပြီးရင်တော့ တန်တယ်လို့ပြောနိုင်မှာ..။
Cook- 8 h
Ready In- 8 h 30 m
ခင်ဇော် says: ရေ ၃ ဂါလံ ဆိုလို့ မှားလားမသိဘူး တွေးနေတာ။
kai says: ဂျပန်နည်းအရဆို.. အဲလိုအဆီပါ၊ အညစ်အကျေးပါ၊ အနံ့ပြင်းတဲ့ အသား၊ကလီစာတွေပြုတ်ရင်.. ၂ခါပြုတ်လေ့ရှိတယ်..။ ပထမတခါပြုတ်ပြီး.. ရေအေးနဲ့ဆေးချသန့်စင်လုပ်လေ့ရှိတယ်..။
ဒုတိယရေမှာ.. အရသာ( ပဲငန်ပြာရည်၊ သကာရည်၊ အရက်) စတာတွေပြန်ထည့်ပြီး.. ပေါ်လာတဲ့အမြှုပ်တွေအကုန် ဇွန်းနဲ့ထိုင်ဆယ်.. လွှင့်ပစ်လေ့ရှိတယ်..။
သူတို့အယူအဆအရ.. အမြှုပ်က.. အညစ်အကျေးတွေပဲ..။
ကောင်းတဲ့လုပ်နည်းလို့ထင်တယ်..။ မြန်မာတွေကျ.. မုန့်ဟင်းခါးငါးပြုတ်ရည်မှာ.. အမြှုပ်ဆယ်သလား.. သိချင်သား…။
၀င့်ပြုံးမြင့် says: မြန်မာတွေ အမြှုပ်ကို ဆယ်လေ့မရှိဘူး။ ပဲပြုတ်လည်း မဆယ်ဘူး။ ဆယ်မိတဲ့ ကျမကိုတောင် ၀ိုင်းပြီး ပညာပေးကြသေးတယ်
၀င့်ပြုံးမြင့် says: အပေါ်က ဟင်းခွက်တွေ တစ်ခွက်မှ မစားဖူးတော့ လူဖြစ်ကျိုး မနပ်သလိုပဲ
ခင်ဇော် says: ကျနော်မစားဖူးတာတွေလည်း အများသားရယ်
Thint Aye Yeik says: .ကြက်အူ
.ကြက်ကောက်ကောက် ဆိုတာ ဘာလဲ မသိ။
ခင်ဇော် says: ကြက်ကောက်ကောက် ဆိုတာ ကြက် အဟွာ တဲ့။
Thint Aye Yeik says: အမငီးးးးးး ပေါက်ပေါက်လျှာလျှာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 110
Tawwin Pan says: အစားအသောက်တွေပြပြန်ပီ။ စားပဲစားချင်တာ။ အဲလောက်လုပ်လည်းမလုပ်တတ်၊ စိတ်လည်း မရှည်ဆိုတော …….
မမကြီးခင်ဇော်ကို မောင်လေးပေးပြီး ယောင်းမတော်လိုက်ရင် ကောင်းမလားလို့……ဟိဟိ
ရွာ ထမင်းဆိုင် ဖွင့်ထားတာပါဆိုမှ အစားအသောက်ပုံမတင်လို့ ဘာတင်ရမတုန်းး
ဒါတောင် အချိန်မှီမဖွင့်နိုင်လို့ တလ တလ ကြံရဖန်ရတာ။
ချက်တာက စားဖိုမှူးတွေချက်တာ တိလားး
တညားက မချက်တတ်ဘူးး ဆိုင်ထိုင် ပိုက်ဆံသိမ်းတာ။
Foolish Girl says: ကလီစာတွေက စားချင်ပေမယ့် မစားတတ်တော့ လူဖြစ်ရှုံးတယ်ပဲပြောရမလားဘဲ
၀က်သားတုတ်ထိုးစားရင် တောင်အသဲရယ် အူရယ်ကလွဲလို့ကျန်တာမစားတတ်ဘူး
အသဲကတော့ ဘယ်အကောင်ရဲ့အသဲမဆိုကြိုက်တယ် ကြက်အသဲဆိုပိုကြိုက်တယ်
ငါးဆီဖောင်းကတော့စားလို့ရမှန်းကိုမသိတာ ဈေူထဲကနေငါးအကောင်လိုက်ဝယ်လာရင် ဗိုက်ထဲပါတာအကုန်လွှင့်ပစ်တာ
ခင်ဇော် says: ငါးစီဖောင်း ဆိုတာ ကိုယ်က သေးသေးပဲ မြင်နေတာ။
ခု ဟင်းချက်တဲ့ဟာ က ကြီးကြီးထူထူကြီးတွေ ဆိုပဲ။
ငါးရံ့အူတောင် အပြင်မှာ မမြင်ဖူးဘူးး ချက်ပြီးသားပဲ စားဖူးတာ။
ဝက်ကတော့ တစ်ကောင်လုံး လိုရာသုံးပဲ။
kai says: ဒါက.. ကလီစာသမားတွေသိသင့်တဲ့.. ကျန်းမာရေးရှု့ထောင့်…။
မင်နရယ်တွေ.. ဗိုက်တာမင်တွေတော်တော်များများပါသမို့.. လူငယ်တွေစားသင့်..။
ငါးပူတင်းနဲ့.. ပိုလာဝက်ဝံတို့ဖယ်ပြီး.. တိုတိုလွယ်လွယ်ရေးရရင်.. လေးဖက်နာသမားတွေ..။ ကိုလက်စရောတက်နေသူတွေ.. မစားသင့်ပါတဲ့..။
စားရင်.. အပူချိန်မြင့်မြင့်မှာ.. ကြာကြာချက်ပါလို့စ်…။ Health and food safety issues
Nervous system tissue can be contaminated with TSE prions, which cause bovine spongiform encephalopathy (BSE, “mad cow disease”); in some jurisdictions these offal are classified as specified risk materials and are subject to special regulations.
ခင်ဇော် says: တညား ဆီမှာ လေးဘက်နာမရှိပေမဲ့ ကိုလှစော ရှိမှာတော့ အမှန်ပဲ။
ဘယ်လောက် ရှိမရှိတော့ မစစ်ဖူးဘူးး
အောင် မိုးသူ says: အကုန်လုံး စားချင်စရာတွေချည်းပဲ
ဦးကြောင်ကြီး says: ဂဇုကို လအင်ထပ်
kai says: ဇီဇီရေ..